Suxufi Cumar Dheere Yuu u Xiran Yahay? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Suxufi Cumar Dheere Yuu u Xiran Yahay?
Posted: Maxamed Cismaan - August 10, 2017 2 Comments
Suxufi Cumar Dheere oo maalintii shanaad ku xiran xabsi gaar ah
Suxufi Cumar Siciid Maxamed Akhyaar waxaa la geeyey xabsi kumeel-gaar ah oo loo sameeyey dadkii Koonfurta ka imaan jirey ee looga shakiyo in ay u socdaan al-Shabaab kaas oo ku yaala Kontroolka Koonfureed ee Garoowe, xabsigan ayaan waraku sheegayaan in ay ilaalo ka yihiin ciidanka ilaalada Kontroolka oo aanu ahayn mid hoos yimaada Wasaaradda Caddaaladda.
Xariga Suxufi Cumar Siciid ayaa ah mid ka hor imaanaya xuquuqda muwaadinka Puntland, wuxuu meel uga dhacayaa dastuurka Puntland waxaana uu sumcad xumo ku yahay maamulka Puntland. Sida uu qabo sharciga Puntland, kan Soomaaliya iyo kan Caalamiga ahba, lama hayn karo qof muwaadin ah isaga oo aan maxkamadi xukumin wax ka badan 48 saacaadood. Cumar Dheere ayaa habeenkii shanaad ku xiran xabsi aan rasmi ahayn oo ka baxsan ciidanka asluubta iyo weliba Wasaaradda Caddaaladda.
Sarkaal kale oo ka gaabsadey in aan magiciisa daabacno ayaa sheegay in Cumar Dheere u xiran yahay qof ka shaqeeya Madaxtooyada ama awood ku leh halkaas, waxaana uu tusaale u soo qaatey xabsiga uu ku xiran yahay oo yiri haddii aad aragtaan qof lagu xiray Kontroolka Koonfureed ee Garoowe oo ah xabsi aan rasmi ahayn wuxuu u xiran yahay qof ka shaqeeya Madaxtooyada ama si uun ugu xiran oo awood ku leh Madaxtooyada kaas oo ilaashanaya danihiisa shakhsiyadeed.
Hay’adda CPJ oo xiriir la sameysey Madaxtooyada Garoowe ayaa sheegtey in Afhayeenka Madaxtooyada Cabdullaahi Jaamac Quraan-jecel uu ka jawaabi waayey teleefon hay’addu u dirtey sidoo kale jawaab ka soo bixin waayey qoraal CPJ u dirtey.
Sida ay u sheegeen Horseed Media saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland oo si hoose ula soo xiriirtey Horseed Media waxaa xariga Cumar Siciid Maxamed wax ka og Cabdifaitaax Maxamed Sugulle oo ah ganacsade siyaasadeed oo xiriir dhaw la wadaaga Madaxtooyada Puntland.
Cabdifitaax Maxamed Sugulle ayaa ahaa nin dhalinyaro ah muddo ka shaqeynaayey arrimaha bulshada, wuxuu ka soo shaqeeyey ururkii Ardeyda Puntland ee PSA iyo dallada PUNSAA oo Cumar Dheere ka tirsanaan jirey wuxuu kamid ahaa guddigii hormarinta magaalada Bosaso ee la dhisey xiligii maamulkii Dr. Cabdiraxmaan Faroole, waxaa lagu tilmaamaa in uu kamid ahaa dhalinyarada leh mustaqbalka siyaasadeed oo lagu bartey hufnaan iyo fir-fircooni. Haddaba waxaa la isweydiinayaa waxa ku kalifey Cabdifitaax Sugulle in uu noqdo qof u dhaqma sida Udayi Saddam iyo Qusay Saddam Xusseyn? maxay tahay waxa ku xanbaari kara in uu ku xadgudbo xuquuqda muwaadin la siman?. Maxayse tahay sababta ka danbeysa ee Cabdifitaax Maxamed Sugulle ku kaliftey in uu xiro Cumar Dheere oo kamid ahaa bahda uu saaxiibka lahaa?.
Suxufi Cumar Dheere ayaa wax ka qorey arrimaha sicir bararka iyo lacagta lagu daabaco Puntland. Cabdifitaax Sugulle waxa uu kamid yahay shakhisyaadka lagu eedeeyo in ay saami ku leeyihiin Makiinada lacagta sameysa ee gudaha Bosaso. Horseed Media si madaxbanaan uma xaqiijin karto eedeyntaas, waxaase la is weydiinkaraa qoriga xabbadu ka dhacdey qiiqiisa ayaa lagu daba galaa, xarigga Cumar Dheere wuxuu muujinayaa awoodda Cabdifataax Sugulle ku dhex yeeshay maamulka Cabdiweli Cali Gaas, isaga oo hadda u adeegsanaya si khaldan awooddaas.
Cabdifitaax Sugulle ayaa barta uu Facebook ku lee yahay kuqoray maalin kadib xarigga Cumar Dheere in uu aad uga xun yahay kana shaqeynaayo soo deyntiisa, waxaase qoraalku u muuqdaa in uu yahay “iilka kii dhigay u ergootooy”. qoraalkiisa ayaa u qornaa sidaan.
Update: Cabdifataax Maxamed Sugulle oo goor danbe xiriir lsoo sameeyey Horseed Media ayaa iska fogeeyey xariga Cumar Dheere [Halkan ka akhriso]
Ururada u dooda Xuquuqda Aadanaha iyo weliba kuwa sida gaarka ah ugu dooda ilaalinta xuquuqda suxufiyiinta ayaa u gudbiyey Baarlamaanka Puntland in ay u yeeraan hay’adda uu u xiran yahay Cumar Dheere waxna ka weydiiyaan sababta 5 maalmood uu ugu xiran yahay Xabsi gaar ah, sababta loogu tuntey dastuurka Puntland iyo xuquuqda uu siinaayo muwaadiniinta. Sida Horseed ka ogaatey qaar kamid ah Xildhibaanada Puntland waxaa ilaa hadda ay la xiriireen Ciidanka asluubta iyo saraakiil si gaar ah u hawlagala kuwaas oo sheegay in aysan waxba ka ogeyn, waxaana ilaa hadda la is weydiinayaa cidda rasmiga ah ee Cumar Dheere u xiran yahay. Wasaaradda Warfaafinta Puntland ayaa iyaduna sheegtey in aysan waxba ka ogeyn xarigga Cmar Dheere, waxaana sidaas hay’addaaha xuquuqda aadanaha u sheegay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta ee Puntland iyo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta.
Horseed Media waxay ugu baaqeysa Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas in uu soo dhexgalo arrintan oo xuquuqdiisa u soo celiyo Cumar Dheere, Madaxweynaha isaga ayaa laga doonayaa in uu ilaaliyo dastuurka Puntland, Xariga Cumar Dheere waxa uu meel uga dhacayaa dastuurka Puntland qodobkiisa 27, farqadda kowaad ilaa sideedaad. Xitaa haddii qofku denbi galo wuxuu uu lee yahay xuquuq uu siinaayo dastuurku ee maaha in lagu hayo xabsiyo gaar ah oo ka baxsan xeerka.